रक्सी तथा लागुपदार्थको लतसंग सामना गर्ने उपाय
समस्याहरूसँग सामना गर्नको लागि व्यक्तिले नकारात्मक सामनाका उपायहरू जस्तै लागुपदार्थ, रक्सी, चुरोट जस्ता पदार्थहरूको सेवन गर्दछ भने तत्कालको लागि त्यसले समस्या समाधान गरेजस्तो लाग्ला तर भविष्यमा त्यसले व्यक्तिको जीवन, परिवार र समाजमा दुःखद् परिणामहरू निम्त्याइरहेको हुन सक्छ ।
यसर्थ हामी बेलैमा सचेत भएनौँ भने पैसाको धेरै नास त हुन्छ नै साथै यो कहिल्यै नसुल्झिने र उपचार गर्न असम्भव झैंँ हुने जस्ता समस्याहरुको भुमरीमा हामी फस्न सक्छौँं ।
तसर्थ, तपाईंले यस्ता कुलतहरू प्रयोग गर्न भर्खरै सुरु गर्नु भएको छ भने यहांँ उल्लेख गरिएका उपायहरू काम लाग्न सक्छन् । अन्यथा, लामो समयसम्म यसको प्रयोग गर्नु भएको छ, दिनदिनै तलतल लाग्ने र प्रयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ र रक्सी तथा लागुपदार्थ लिन छोड्दा हात, खुट्टा काम्ने, रिँगटा लाग्ने र अधिक तलतल लागेर छटपटी हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएका छन् भने तुरुन्त कुनै उपचार केन्द्र वा पुनर्स्थापना केन्द्रमा सम्पर्क राख्नु होला ।
सर्वप्रथम त के बुझ्नु आवश्यक छ भने रक्सी तथा लागुपदार्थ त्याग्ने इच्छा तपाईं आफैबाट आउनुपर्छ अनिमात्र कसरी त्यसलाई छोड्न सकिन्छ भन्नेतर्फ प्रभावकारी पाइला चाल्न सकिन्छ । त्यसको लागि सुरुमा आफैसँग निम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोस् :
तपाईंले रक्सी वा लागुपदार्थ प्रयोग गर्दा के कस्ता बेफाइदा त्यसले आफूमा निम्त्याएको जस्तो लाग्छ ?
तपाईंले रक्सी वा लागुपदार्थ प्रयोग गर्दा कुनै त्यस्ता कुरा भए जसको तपाईंलाई पछि पछुतो लागेको थियो ?
तपाईले यी लतहरू प्रयोग गर्न छोडनु भयो भने के कस्ता परिवर्तनहरू आफूमा र आफ्नो परिवार तथा समाजमा पाउनु हुनेछ ?
तपाईंले विगतमा के कस्ता उपायहरू अपनाउँदा रक्सी वा लागुपदार्थ छाड्ने निर्णय लिन सघाउ पुगेको थियो ? (तपाईंभित्रै रहेको दृढ निश्चय गर्न सक्ने क्षमता आदिले फेरि उक्त निर्णय लिन सघाउनेछ ।)
यी लतहरू छोड्नको लागि पहिले कसकसले तपाईंलाई सहयोग गरेको थियो ? उनीहरूले अहिले कसरी तपाईलाई फेरि सहयोग गर्न सक्छन् ?
तपाईंले यस्ता रक्सी तथा लागुपदार्थको प्रयोग बन्द गर्न आफैले के कस्ता उपायहरू अपनाउन सक्नु हुन्छ ? त्यसमा अरु व्यक्ति वा संघसंस्थाले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् होला ?
आफूलाई यी प्रश्नहरू गरिसकेपछि, कृपया, आफ्नो व्यवहार परिवर्तनका लागि योजनाहरू बनाउनु होस् । यसमा परिवारका सदस्य र साथीभाइहरूको सहयोग पनि लिनु होस् । याद राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आफूले बनाएका योजनाहरूमा काम गर्दा असफल पनि भइन्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा अघिको प्रकृया फेरि दोहोर्‍याउनु होस् । सहयोग चाहिएमा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नु हुन्छ ।
थप जानकारी र अन्य सहयोगको लागि, कृपया, टि.पि.ओ. नेपाल, बालुवाटार, काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नु होला ।